साताभरको निद्रा एकदिन सुतेर पूरा गर्न सकिन्छ ? - eNepal
साताभरको निद्रा एकदिन सुतेर पूरा गर्न सकिन्छ ?
April 16, 2019/ Information/ No Comments/
एजेन्सी । विश्लेषकहरुले यसअघि नै सबैलाई साताभर गुमाएको निद्रा बिदाको बेला सुतेर पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट बताइसकेका छन् । तर २०१८ मा प्रकाशित ‘जर्नल अफ स्लिप रिसर्च’ ले सो निष्कर्षमाथि प्रश्न गर्दै बिदाका बेला सुत्नुले निद्रा नपुग्दा उत्पन्न हुने केही जोखिमहरुलाई कम गराउन सक्ने दाबी गरेको छ ।
अपूरो निद्राका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरदेखि चाँडै मृत्यु हुने सम्मका खतरा कम हुन सक्ने जर्नलमा उल्लेख छ ।
तर यता ‘करेन्ट बायोलोजी’ मा प्रकाशित अध्ययनले भने हप्ताभर गुमाएको निद्रा छुट्टीको समयमा आराम गरेर पूरा गर्नु पर्याप्त नहुने र यो दिर्गकालीन समयका लागि फाइदाजनक हुन नसक्ने बताएको छ ।
वास्तवमा अहिलेका मानिसहरु निद्रालाई बैंक अकाउन्ट जस्तै सम्झिन्छन् र सोमबार एक घण्टा कम सुत्ने व्यक्तिले शनिबार एक घण्टा बढी सुतेर तालमेल मिलाउन खोज्छन् । तर यो विषय यति सहज नभइ धेरै जटिल रहेको युनिभर्सिटी अफ मिचिगेनकी न्युरोलोजी प्रोफेसर डाक्टर क्याथी गोल्डस्टिन बताउँछिन् ।
उनका अनुसार यसरी अगाडिको निद्रा अर्कैदिन सुतेर पूरा गर्दा यसका केही तत्कालीन फाइदा हुन सक्छन् तर यसलाई वास्तवमै घण्टाका हिसाबले मापन गरि पूरा गर्न सकिँदैन ।
यसअघिका अनुसन्धानहरुमा एक घण्टाको अपूरो निद्रा पूरा गर्न कम्तीमा पनि चार दिन पर्याप्त आराम आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यसैले पनि गणितीय हिसाबले अपुग निद्राको भरपाइ गर्न असम्भव रहेको क्याथी बताउँछिन् । उनका अनुसार समयसँगै अधुरो निद्राका रातहरु पनि बढ्दै जाने हुँदा कहिल्यै शरीरलाई पूर्ण रुपमा निद्राको भरपाइ गर्न सकिँदैन ।
उनी भन्छिन्, “कहिलेकाहिँ रातभर जागेर बस्नु वा बिहान धेरै छिटो उठ्नु हामीलाई ठूलो कुरा लाग्दैन । तर वास्तवमा निद्रा पूरा नहुनुले हाम्रो शरीरको थकान मात्र नबढाएर शारीरिक घडीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।”
शारीरिक घडी एक आन्तरिक प्रणाली हो जसले रातिको समयमा सुत्ने र दिनमा सक्रिय रहने हर्मोन रिलिज गरिरहेको हुन्छ ।
‘नेस्नल स्लिप फाउन्डेसन’ का अनुसार हाम्रो शारीरिक घडीले प्राकृतिक रुपमा रातको करिब ९ बजेदेखि नै निद्रा लगाउने मेलाटोनिन हर्मोनको उत्पादन बढाउन थाल्छ भने बिहान हुँदै जाँदा त्यसको मात्रा घट्दै जान्छ । यसरी यो प्रणालीलाई उज्यालोले धेरै प्रभाव पार्ने हुनाले नै राति मोबाइल लगायत स्क्रिनसँग सम्पर्कमा आएपछि हामीलाई सुत्नमा कठिनाइ हुने गर्दछ ।
तर यदि हामीले स्थिर रुपमा निद्रा पूरा गरि सुत्ने र उठ्ने एउटा निश्चित तालिका बनायौँ भयो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक घडी यसैमा निर्भर हुन थाल्छ र हामीलाई आफूले निर्धारण गरेकै समयमा सुत्न र उठ्न समस्या हुँदैन । तर सुत्ने समयमा आफ्नो दैनिकी भन्दा थोरै पनि तलमाथि भएमा चाहिँ हामीले त्यसका विभिन्न प्रभावहरु आफैँ महसुस गर्न सक्ने क्याथी बताउँछिन् ।
जस्तै केही दिन लगातार ढिला सुत्नुले पनि हाम्रो शारीरिक घडीलाई पछि सारिदिनेछ जसपछि हाम्रो शरीर रातिसम्म जागिरहन चाहान्छ । यसैले नै शुक्रबार अबेरसम्म नसुतेको मान्छेलाई शनिबार राति सुत्न कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसरी शरीरिक घडीमा बाधा पुग्नुका आफ्नै जोखिम छन् । जस्तै यसबाट सबैभन्दा बढी रातिको सिफ्टमा काम गर्ने व्यक्तिहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
यसैसँग सम्बन्धित कारणहरुले उनीहरुमा क्यान्सर, मस्तिष्कको क्षमता कम हुने र चाँडै मृत्यु गरेको पत्ता लागेको छ । तर शारीरिक घडीले रातिको तालिका भएका व्यक्ति मात्र नभइ अनिश्चित ढङ्गमा सुत्ने साधारण मानिसको स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै नकारात्मक असर पार्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसरी दिनको एक घण्टा निद्रा गुमाउनु २०० अतिरिक्त क्यालोरी सेवन गरे बराबर हुने बताइएको छ । त्यसैले थकानका साथै अपूरो निद्राले उत्पादकत्व पनि घटाउने हुँदा केबल एक शनिबार आराम गरेर कहिल्यै भरपाइ गर्न नसकिने बताइएको हो ।
त्यसैले गुमाएको निद्रा पूरा गर्न दिनदिनै लामो समय सुत्नु भन्दा दिउँसोपख छोटो समय निदाउनु धेरै प्रभावकारी हुन सक्ने क्याथी बताउँछिन् । यस्तोमा शारीरिक घडीलाई सन्तुलनमा राख्न रातिको समय स्क्रिनको कम प्रयोग गर्न र अत्यन्तै व्यस्त भएपनि सुत्नका लागि थोरै समय निकाल्न क्याथीको सुझाव छ । टाइम
मेल्बोर्न सामुदायीक भवन निर्माण सहयोगार्थ सप्ताह पुराणको आधिकारीक थालनी आईतबार हुँदै
गएको साल स्किल्ड भिषा यतिले पाए, कति नेपालीले पाएछन् हेर्नुहोस तथ्याङ्क
अस्ट्रेलीयामा कामका उत्कृष्ट सय वेभसाईट
मेलबर्नमा गोर्खाली क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट टुर्नामेन्ट हुदै |
महालेखाले औँल्याएको सेनाका चार ‘बदमासी’ यस्ता छन्
अस्ट्रेलीयाको भिषा लाग्यो अब के गर्ने!!!
पेपर म्यारिज र फेक डिपेन्डेन्ट: निल्नु न ओकल्नुको नाता